Ongoti abaningi kweqiniso uthanda ukuphuza itiye puerh, emelela isiphuzo ukuthi inqubo ukukhiqizwa is phansi lwezithelo olubangela ukubila. Sekungamakhulu eminyaka Puer zisebenzisa e-China. Eminyakeni yamuva khudlwana inani abalandeli walesi siphuzo engavamile e-Russia. Ngamanani ezikhangayo izinhlobo ezehlukene itiye Chinese esiyingqayizivele angathengwa at Teadepot esitolo online.
Ukuze kukhiqizwe lolu hlobo itiye usebenzisa amahlamvu, okuyinto kuqoqwa sezihlahla ezikhulayo kwezifunda zezintaba of China. On the amahlamvu kubunile itiye kwemboni, iphuma, isibilile, omisiwe futhi ecindezelwe. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka itiye, okuyinto nogologo ezinhle, ngeminyaka ngcono ukunambitheka kwako. Puer ngokuvamile sicindezelwe futhi akhangiswe ngesimo amakhekhe, amakhekhe, nezitsha, ikhekhe noma olunye uhlobo. Ukuthengiswa nokuthi isisindo lolu hlobo itiye.
Zonke izinhlobonhlobo Puerh zihlukaniswe ngezigaba ezimbili: Shen Shu. Ahluke izici yokukhiqiza ubuchwepheshe. Shen erh limelela "eluhlaza", itiye ezingacubunguliwe. Ngokusho impahla yayo, useduze green tea. Shu Puer - "abavuthiwe 'itiye kusetshenzwe. Lokhu isiphuzo lisondele ezakhiweni zalo ukuze itiye elimnyama. Pu-erh enephunga obucayi, iphunga olubucayi futhi akukho aftertaste engenakuqhathaniswa. Lolu hlobo itiye bubaluleke kakhulu futhi ukuphulukiswa yayo izakhiwo.
Puer, lapho Chinese ushayele liyini ikhambi lokuhlupheka izifo, kusiza ukusetshenziswa njalo:
ukunika amandla emzimbeni namandla;
izitsha ezihlanzekile futhi kujwayeleke ingcindezi;
ukulwa amaseli abulalayo;
ukuthuthukisa isisu namathumbu;
ukuqeda izinhlungu zekhanda;
ubuyisele isikhumba abasha.
Ucwaningo olwenziwa emazweni ahlukahlukene, wembula ukuthi Puer iwukudambisa imiphumela emibi-nicotine. Lokhu isiphuzo iyakwazi nokuba mbaxa ekuqedeni Hangover. Puer asenze umzimba, kutuswa ukuba baphuze ekuseni emini. Ochwepheshe ukweluleka ukuphuza nsuku zonke 3-5 izinkomishi lokhu itiye, eliqukethe e ngezithako zawo ezihlukahlukene amavithamini, amagciwane kanye nezakhi.
Puerh kungani hhayi ukuthenga esitolo Teadepot
Isitolo sethu inthanethi onguchwepheshe ukudayiswa itiye baseChina abakhiqizi okuthembekile. Thina isiqiniseko kumakhasimende:
itiye izinga okusezingeni eliphezulu;
kukhethwa elula indlela yokukhokha;
ukulethwa ngokushesha eMoscow nakwamanye izifunda of Russia;
Ungakwazi oda noma yiluphi uhlobo lokuthokoza Puer manje. Phuza itiye enempilo Chinese unakekele impilo yakho!
Tea kusigaba nemingcele ezahlukene. Izinhlobo, izici nabenzi itiye
Ushingamu for kwesisindo: ukubuyekezwa. Abahlukile ushingamu for kwesisindo Ukudla Gum